> Resource> Naghachi> Olee naghachi ehichapụ Pictures si Canon EOS 50D
Foto dị nhichapụ i nwere ike ezute na Canon ese foto
»Hichapụ foto ndị si Canon EOS enweghị
ndabere» Hichapụ foto kama ịzọpụta site mmadụ na mberede na ịpị ọjọọ button
»Hichapụ ndị 'na-adịghị-na-mma' na foto mgbe ị na-ahụ gị Canon kaadị ebe nchekwa ohere bụ
ezughị» Hichapụ foto mgbe ebufe foto ndị si Canon EOS na ngwaọrụ ndị ọzọ na-enweghị ifiọkde ebufe okpu.
Ngwọta naghachi ehichapụ foto ndị si Canon igwefoto
Ihe mbụ na-abịa mbụ, na-etinye gị Canon igwefoto n'ebe dị nchebe na adịghị na-agbali-ewe ihe foto na Canon EOS kaadị ebe nchekwa. Nke a bụ maka nche nke ehichapụ foto bụrụ na ha na-unrecoverable n'ihi kaadị ahụ mebiri ma ọ bụ foto overwriting.
Mgbe ahụ ndị kasị mma na kacha ụzọ naghachi foto ndị si gị Canon EOS bụ na-a Canon foto mgbake omume ime ọrụ.
N'ihi na Windows ọrụ, na-agbalị Wondershare Photo Recovery (dakọtara na Windows 8/7 / Vista / XP) - a foto mgbake omume e mere iji naghachi ehichapụ foto ndị si Canon ma ọ bụ nchekwa ngwaọrụ tinyere igwefoto dijitalụ dị ka Canon EOS.
N'ihi na Mac ọrụ, na-echigharịkwuru Wondershare Photo Recovery for Mac - a Mac foto mgbake omume nke nwere ike salvage gị na mberede ehichapụ foto, videos na music si dijitalụ media.
Dowload free ikpe version n'okpuru nwere a na-agbalị ugbu a.
Step1: Jikọọ Canon kaadị ebe nchekwa na kọmputa.
Mgbe nbudata na na na wụnye usoro ihe omume na kọmputa gị, N'ezie na Windows OS arụnyere. Mgbe ahụ jikọọ gị Canon EOS igwefoto kaadị ebe nchekwa na kọmputa na n'okpuru 4 ụzọ. Ị ga-ahụ na kaadị gosiri dị ka a mbanye akwụkwọ ozi (dị ka H :) na Windows Explorer.
Step2: hụrụ ehichapụ Canon foto
Họrọ otu n'ime ndị mgbake ụdịdị dị ka gị mkpa, họrọ lekwasịrị disk ebe gị foto ehichapụ, wee pịa bọtịnụ 'iṅomi' na-amalite akpaka scanning usoro.
Step3: Preview na-agbake ehichapụ foto
Mgbe ọ gụchara na scanning usoro, a na ndepụta nke faịlụ na a hụrụ gị Canon EOS kaadị ebe nchekwa ga-emere. Ke adianade do, na a ga-preview window nke recoverable photos ebe ị ike ihuchalu thumbnail nke hụrụ foto ndị si gị Canon igwefoto. Mgbe ahụ ị chọrọ ịzụta ihe software iji rụọ ọrụ. Pịa bọtịnụ 'Naghachi' na gị ehichapụ photos ga-azụ ruo aka ọzọ.
Mma ịzọpụta natara photos a dị iche iche disk iji ọma naghachi ehichapụ foto site na Canon EOS igwefoto dijitalụ bụrụ na ehichapụ foto bụ ikpe dekwasịzie.
Video nkuzi nke Canon EOS foto mgbake